Ejipta · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Mey, 2017
Ejypta: Notapahana ny Mpamatsy Tolotra Aterineto Sisa Tafajanona, Ahiana Hotapahana Ihany Koa Ny Tambajotra Finday
Fanoherana 25 Mey 2017
Nosakanana ny mpamatsy tolotra aterineto, noor nijoro farany tao Ejypta, tsy misy aterineto intsony ao Ejypta tamin'ny faraparan'ny volana janoary 2011
Ejypta: “Tsy Matahotra Intsony Izahay”
Fanoherana 24 Mey 2017
Misasakalina izao ao Kairo, Ejipta, izay mitohy ao anatin'ny andro faha-enina ny fihetsiketsehana manohitra an'i Mubarak. Satria mihamafy ny hetsi-panoherana, mihamafy tahaka izany ihany koa ny sitrapon 'ny olona hanongana an'i Hosni Mubarak, izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 30 taona.
Fanoherana 23 Mey 2017
Ejypta: Mikorontana i Mubarak Satria Mitohy Ny Fihetsiketsehana
Mitohy ny fihetsiketseham-bahoaka, ao anatin'ny andro fahenina misesy. Na dia teo aza ny ezaka hampangina tanteraka ny olom-pirenena sy ny fampahalalam-baovao mahazatra, mitohy manjaka hatrany ny vaovao avy ao Ejipta.
Nitsangana Ny Sendikà Tsy Miankina Voalohany Ao Ejypta
Fahalalahàna miteny 23 Mey 2017
Nanangana ny sendikan'izy ireo tsy miankina voalohany ireo mpanangona hetran-tany ao Ejypta, nahazo fankasitrahana iraisam-pirenena sy tao an-toerana.
Ejipta: 30 Andro Anoratana Bilaogy
Hevitra 23 Mey 2017
Nandray anjara taminà hetsika iray nantsoina hoe "30 Andro Anoratana Bilaogy" ry zareo Ejiptiana, izay tsy maintsy anoratany lahatsoratra vaovao iray isanandro mandritry ny volana iray manontolo.
Ejipta: Gaza No Lohateny Vaventy
Palestina 23 Mey 2017
Entin'i Eman Abd Al Rahman ho antsika ireo lohateny vaventy avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Ejiptiana milaza ny fahorian'ireo Palestiniana tao Gaza tamin'ny Janoary 2008. Andro efatra nanaovana fahirano nampilentika an'i Gaza ho anaty haizina, niteraka antso iraisampirenena sy hatezerana teny amin'ny arabe Arabo ho fampitsaharana ny fandripahana.
Amerika Avaratra 20 Mey 2017
Netizen Report: Volavolan-dalàna ao Ejypta Mety Hanakana ny Media Sosialy
Fahalalahàna miteny 13 Mey 2017
Mametra ny fahalalahana miteny i Ejypta, nosakanan'i Tiorka ny Wikipedia, nakaton'i Rosia ny WeChat, ary tsy afaka manakana ny fitsikilovana ny UK.
Volavolan-dalàna Mety Hitakiana Amin'ireo Ejiptiana ny Hanoratany Ny Anarany Any Amin'ny Fanjakana Rehefa Mampiasa Media Sosialy
Fahalalahàna miteny 05 Mey 2017
Mety hiatrika fidirana am-ponja mandritry ny volana enina miampy fandoavana sazy ara-bola ireo mpampiasa tsy manoratra anarana.